トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "simba", iro shamwari manzwiro?
uremu shanduro kuti kuzvitaurira 3500 Yen Sunungura simba "simba" neizvi nzvimbo kadhi chiratidzo ∞ kudzokera zvinyoronyoro shumba mambo mhuka sei iwe vanomutswa stroking vanokweverwa. Kazhinji rume mufananidzo achiti "simba", asi zviri nyore kufungidzira vanhu simba rakaita vachishandisa shanduro mambo uye matangi, kadhi kwesimba ichi uremu shanduro rave wakavhomorwa ndiye mukadzi nemutsa.
Naizvozvo angada ukacherechedza yatovapo, "mutsa" chii chombo pakukura, iwe zvakadai kuti isimba. Kunyange tsitsi namambo zvikara shumba zvinogonawo ainzi ruoko, chaiyo nekuti pane unyoro, vakadzi ndivo zvinoratidza kuti pane haaperi pakuzvivimba.
rehondo kadhi ndizvo zvinorehwa ndiye saizi kugona, simba nechido, uchenjeri, ushingi, nokuti kumhanya simba, pane simba, akadai urove kunyange vanonzi shamwari, vanokwezvwa simba inobatanidza anokumhan'arira zvichava.
rehondo anokumhan'arira manzwiro
rehondo kadhi rine zvakanaka nzvimbo Vanzveri kuti kwaireva akabuda zvakanaka nzvimbo pane kuti isu mberi nechivimbo, kuvandudza mamiriro acho ezvinhu, unobereka zvikuru anomiririra kunogona kuwanikwa zvimwe zvabuda. Kana vaviri ndinofunga vanhu, mumwe ndiye Ndinofunga zvinokosha sezvo zvakaoma kuchinja kupfuura chero ukama newe. Kwete ini kumiririrwa zvinonzwika, asi inofungidzirwa kuvapo kwenyu uye -yevedza kwazvo, tariro uye vanoda kuti urere ichi anoramba ukama hwavo.
kunyange sezvo paiva kana vanhu vanoda zvichideredza ukama hwavo, Kana iwe enda kumhanyira nevanhu vaviri, kuti kuva kukurira chinhu, ipapo muchava vanhu zvakatowanda vaviri vanoda avo simba , muchato ndichapindawo kupinda maonero. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo tinoziva kuti iwe uye kuvapo inokosha. Ndicho hwakavimbika zvikuru, asi nekuda ndinonzwa vo ita dzisingambosvikiki Ukuwo, ungada kuedza uchikurukura Frank ari shamwari mupfungwa. Kana iwe
rehondo kadhi iri neizvi nzvimbo Vanzveri kureva achipinda neizvi chinomirira mamiriro ezvinhu umo kuzvivimba uye narcissistic vangobvumira akasika zvinhu zvakaipa. Kana vaviri ndinofunga vanhu, mumwe bato iri kana zvisisakwanisiki manzwiro yairambidzwa nokuti hurumende kuti arasa nechivimbo, zvakaoma zviri nani kuisiya sezvo asina zvakawanda kubva nyangarara.
muine chero manzwiro kwamuri, asi hamugoni kuitwa zvakanaka, nokuti imi muri akabata ungagumbuka, Ndichaenda murinde zvinyoronyoro. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo rinomiririra kuti haasi Hito, iwe varege wakaona uyewo sezvo rinokosha chipo kwamuri. Chokutanga, tichaisa kumirira kunogona mumwe bato wokuwanazve dzavo.